သဘာဝကျကျအေးအေးဆေးဆေး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား »သဘာဝကျကျအေးအေးဆေးဆေး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်
သဘာဝကျကျလောင်ကျွမ်း၏အပူတည်ငြိမ်အောင် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု6အောက်တိုဘာလ 2019
မီးလောင်မှုသည်၎င်းတို့၏ပြင်းထန်မှုအဆင့်အရခွဲခြားထားသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးများကိုကုသရန်ဆေးကုသမှုလိုအပ်သည်။ အခြားသူများရှိနေစဉ်လောင်ကျွမ်းမှုများသည်အပေါ်ယံဖြစ်ပြီး (များသောအားဖြင့်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့်အရာများ) နှင့်အိမ်လုပ်ကုစားမှုများဖြင့်သက်သာရာရနိုင်သည်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာများကိုမည်သို့အေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်ဤနေရာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ခြင်းအစွန်အဖျား: ရင်ပူဝေဒနာတွေမှ6သဘာဝကကုစား
1 ။ ပျားပျားရည်
ဒီနေ့ပျားရည်ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့လူသိများတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သကြားပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကိုပင်ကူညီသည် အစာခခြွေငျး.
သို့သျောလညျး, သငျသညျပျားရည်ကိုလည်းတစ် ဦး ဆီမွှေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းထိခိုက်ခဲ့areaရိယာပိုးသတ်ဆေး။
ဒါဟာအရသာချိုစေကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် အသားအရေကိုသဘာဝအဆီဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ကူညီပေးသောအစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။
ပျားရည်ကိုပိတ်ကျဲစသို့မဟုတ်ပတ်တီးပေါ်တွင်သွန်းလောင်းရုံမျှမကဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အသုံးချပြီးအနည်းဆုံး3နာရီကြာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် miel သင့်အသားအရေပျောက်ကင်းသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။
2 ။ ကြက်သွန်ဖျော်ရည်
သူတို့၏ဖျော်ရည်တွင်ဆာလဖာဒြပ်ပေါင်းများနှင့် antioxidants များပါဝင်ပြီးအပူလောင်ခြင်းနှင့်နီရဲခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်
ဒါပေမယ့်အဲဒါအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်းဤအများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကန့်သတ် အရည်ကြည်ဖု မီးလောင်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းနီးပါးပေါ်လာသည် ကူးစက်မှုဖြစ်စေနိုင်သောဘက်တီးရီးယားများမှကာကွယ်ပေးသည်။
3 ။ လာဗင်ဒါဆီ
က Les မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကုသရန်နှင့်ကုသရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါတို့ကိစ္စမှာ လာဗင်ဒါသည်အရေပြားကိုကာကွယ်ပေးသော analgesic နှင့် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ အရေပြားတစ်သျှူးများကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အရေပြား၏အသွင်အပြင်ကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အထိရောက်ဆုံးသောသဘာဝကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမာရွတ်များ.
သင်၏လက်များသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောသုတ်ပဝါနှင့်လောင်ကျွမ်းရန်ဆီကိုလိမ်းပေးပါ။ အနည်းဆုံး2ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်မီးလောင်ကျွမ်းသည်အထိအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။
4 ။ ခရမ်းချဉ်သီး
ခရမ်းချဉ်သီးသည်အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အပြုတ်ပြင်ဆင်မှုများစွာတွင်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ခရမ်းချဉ်သီးပျော့ဖတ်သည်မီးလောင်မှုကိုကုသရန်အတွက်သဘာဝဆေးတစ်လက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
သူမမှာကြွယ်ဝတယ် အရေပြားပေါ်ရှိအညစ်အကြေးများနှင့်အစွန်းအထင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရေပြားကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ နာကျင်မှုလျော့နည်းသွားပြီးအရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ခရမ်းချဉ်သီးအချပ်များကိုဖြတ်ပြီးဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့လျှောက်ထားပါ။ 20 မိနစ်ခန့်တွင်ထားပါ၊ ထို့နောက်ရေနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးပါ။
5 ။ Black ကလက်ဖက်ရည်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုစားပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ် ၎င်း၏ tannic acid ပါဝင်မှုကြောင့်အပူကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမှထုတ်ယူသည်အရာယားယံခြင်းနှင့်နာကျင်မှု၏ခံစားချက်များကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဤကိစ္စတွင်သင်ကရေအေးတစ်ခွက်တွင်2သို့မဟုတ်3အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်အိတ်များကိုစိုစွတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်မီးထဲ၌ထည့်ပြီးအနည်းဆုံး 15 မိနစ်ခန့်ကြာအောင် (သင်ပိတ်ကျဲစဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်) လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကိုက်, မီးလောင်နှင့် urticaria ဆန့်ကျင် Fenistil
Fenistil သည်ထိရောက်သောဂျယ်လ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးခြင်ကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြုံကြည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမနှစ်မြို့ဖွယ်ယားယံခြင်းကိုနှုတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Read more »
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ